IBanyana ithenjiswe u-R9 million ngokunqoba i-Awcon | Scrolla Izindaba
IBanyana ithenjiswe u-R9 million ngokunqoba i-Awcon
Abadlali beBanyana Banyana bazobe bemamatheka yonke indlela bebheke ebhange uma bephumelela ukuwina i-Africa Women Cup of Nations (Awcon) ezayo.
UMengameli we-South African Football Association (i-Safa) uDanny Jordaan usebathembise ibhonasi ka-R400 000 umdlali ngamunye.
“Sizokhokha u-R9.2 million wamabhonasi kuleli qembu, ngesisekelo sokuthi liwine i-Afcon (yabesifazane),” kusho uJordaan.
“Ngakho-ke, uma bewina i-Afcon sizokhokha u-R9.2 million kanti uma ubheka ezinye izindleko zamanye amazwe imali esiyibekele leli qembu ikakhulukazi nge-Afcon ingu-R10 million.
“Lokhu ukuzibophezela kwethu, nokuthembela kwiBanyana Banyana kanti okumangalisayo ukuthi kuyaqala ngqa ukukhishwa kwemali engaka kwenzelwa iqembu lesizwe. Ngakho nephule irekhodi ngokuba yiqembu lesizwe elikhokhelwa imali eningi emlandweni wakuleli.”
IBanyana iku-Group C kanye nababambe iqhaza emiqhudelwaneni i-Nigeria, i-Botswana kanye ne-Burundi.
Le mali kufanele ize njengesikhuthazo esengeziwe ngaphambi komdlalo wabo wokuqala ne-Super Falcons mhla zizine kuNtulikazi.
Elakuleli lifinyelele kowamanqamu emdlalweni wokugcina owawuse-Ghana ngo-2018 kodwa lahlulwa ngo 4-3 i-Nigeria sekukhahlelwa amaphenalthi ngemuva kokudlala ngokulingana.
Ukaputeni uRefiloe Jane uzizwa sengathi sebekulungele nokuthi bakhuthaziwe ukuthi badlale kangcono kulo mqhudelwano ozosingathwa i-Morocco ngenyanga ezayo.
“Uhlezi usho ukuthi uma siya emqhudelwaneni, ufuna sigxile ekudlaleni nje kuphela,” kusho uJane.
“Kufanele silungise zonke izinkinga esinazo ngaphambi kokuthi kuqale umqhudelwano futhi ngicabanga ukuthi lena ngenye yezinkinga ebesinazo.
“Ukuthi uze lapha uzosihlonipha, usinikeze lesi sithembiso, uhlobo lokugqugquzela iqembu futhi ngiyazi ngaphandle kwaleyo ntshisekelo yokufuna ukuthola imali, sifuna nokuphumela ngaphandle siyomela isizwe sethu ngokuziqhenya.”
Ngemuva kwe-Nigeria, iBanyana izobhekana ne-Burundi mhla ziyisikhombisa kuNtulikazi ngaphambi kokuqeda isigaba sayo samaqoqo ne-Botswana ezinsukwini ezintathu ezilandelayo.
Iqembu lakuleli labesifazane lebhola lezinyawo alikaze lisiwine isicoco sezwekazi kodwa selifinyelele kowamanqamu amahlandla amahlanu (ngo-1995, ngo-2000, ngo-2008, ngo-2012 nango-2018).